Dufaanta Mekuku oo laga cabsi qabo inay gaadho Waddamo hor leh – Radio Muqdisho
Hay’adda saadaasha hawada ee Dalka Sacuudi Carabiya ayaa sheegtey in laga cabsi qabo inay Duufaanta Mekuku kusii fiddo Koonfurta Galbeed ee Dalka Sacuuiga.
Sidoo kale waxay Jimcihii Shalay ee ay Bisha May ahayd 25 isla duufaanta Mekuku ku dhufatay Caasimadda Labaad ee Dalka Cumaan ee Salalah.
Duufaantan oo wadatay Roobab Lixaad leh ayaa halkaasi ku dishay Hal Qof , iyadoo ay mowjaduhu garaacayeen Xeebaha Dalkaasi siday ay sheegtay Wakaaladda wararka Cumaan.
Waxaa heegan la geliyay dhammaan laamaha gargaarka deg-degga ah iyo ciidamada Dalka Cumaan si ay uga qayb qaataan daad guraynta Dadka ku dhaqan goobaha ay ku dhufatay Duufaantu.
Laba Maalin oo dheeraad ah ayaa lagu daray muddadii ay hay’adda duullimaadyada ee Dalka Cumaan u qabatay inuu xirnaado Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Salaala baqdin laga qabo inay sii xoogeysato Duufaanta iyo Roobabka is wata.
Masuuliyiinta wadanka Yemen ayaa iyana sheegay in 17 Qof la la’yahay ka dib markii ay Jasiiradda Soqodara ku dhufatay Duufaanta Mekuku, halkaas oo ay Dowladdu u aqoonsatay aag mussiibo.
Dhawaan ayay ahayd markii ay qaybo ka mid Dalka Soomaaliya ku dhufatay Duufaanta Sagar, taasoo Dad ka badan 50 Qof ku dishay degaannada Soomaaliland iyo Puntland, kumanaan kalana ay ku Guryo beeleen.
W/ Tarjumay ; Idiris Axmed
Dr. Cabdiraxnan Al-Sumayd – u adeegihii fuqara Afrika – dhaxal dahabi ah ayuu uga tegay dadkayga & dalkayga Hooyo!